စစ်ကိုင်း ရတနာ စေတီဆင်များရှင် စေတီတော် အကြီးစားပြုပြင်ရာတွင် သီတဂူဆရာတော်မှ စိန်ဖူးတော် ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ ဧပြီ ၂၄
စစ်ကိုင်းမြို့ ကျက်သရေဆောင် ရတနာစေတီ ဆင်များရှင်စေတီတော် အကြီးစား ပြုပြင်ရာတွင် ရွှေကျင်တွဲဖက်သာသနာပိုင် သီတဂူဆရာတော် ဒေါက် တာအရှင်ဥာဏိဿရမှ မတည် အလှူငွေကျပ်သိန်း ၂၅ဝဝ နှင့်အတူ တစ်ဦးတည်းအလှူအဖြစ် စိန်ဖူး တော်နှင့် ငှက်မြတ်နားတော်များအား လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
ဆင်များရှင်စေတီတော်ကြီး အကြီးစားပြုပြင်မည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ညှိနှိုင်းသြ ဝါဒခံယူပွဲကို ဧပြီ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင်ကျင်းပရာ ယင်းသို့ မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဆင်များရှင်ဘုရားကြီးက ငလျင်ကြီးခုနစ်ကြိမ်ဒဏ်ခံရတယ်။ ပြိုကျပျက်စီးမှုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ် ပေါ်ခဲ့တယ်။ မူလဒါယကာဖြစ်တဲ့ မိုးညှင်းမင်းတရားကြီးက ဒုဋ္ဌဂါမဏိ စေတီတော်ပုံတည်ခဲ့တာ ငလျင် ဒဏ်တွေကြောင့် မူလလက်ရာ ပျောက်သွားတယ်။ အခုပြန်လည် ပြုပြင်တည်တဲ့အခါ မူလလက်ရာ သီဟိုဠ်ပုံစေတီတော်နဲ့တူအောင် ပြုပြင်မယ်။ စေတီတော်ထီးတော်၊ စိန်ဖူးတော်နဲ့ ငှက်မြတ်နားတော် များကို မြန်မာမှုပုံစံနဲ့ပူဇော်မယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် ကျပ်သိန်း ၁၃ဝဝဝ ကျော်ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ ဘုန်းကြီးက ကျပ်သိန်း ၂၅ဝဝ မတည်လှူဒါန်းမယ်။ စိန်ဖူး တော်နဲ့ ထီးတော်ကို တစ်ဦးတည်း အလှူရှင်အဖြစ်လှူမယ်။ ဒီလိုပြု ပြင်ရာမှာ မင်းမပါရင် လုပ်ငန်းတွေ အင်အားချည့်နဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါ။ ဘုန်း ကြီးတို့အနေနဲ့ ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့ အလုပ်လုပ်တာမို့ ဘုန်းကြီးနဲ့လက် တွဲလုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု သီတဂူဆရာတော်ကြီးက မိန့်သည်။
ဆင်များရှင်စေတီတော်ကြီးမှာ စတင်တည်ထားစဉ်က အချင်း ပေ ၉ဝ၊ အမြင့်Óဏ်တော်ကြာဖူး အထွတ်အထိ ပေ ၁၈ဝ ရှိရာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် အချင်းပေ ၁၂ဝ၊ အမြင့် ၁၈၁ ပေရှိကာ ယခုပြုပြင်ရာတွင် စေတီတော်ကြီး ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင် စေရန် သံကူကွန်ကရစ်သံကွန်ချာ ဖြင့် ရေရှည်ခိုင်ခံ့အောင် ကျွမ်း ကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ပုံစံထုတ်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ စေတီတော်ကြီးအကြီးစားပြု ပြင်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ယခု အခါဂေါပကအဖွဲ့မှ အလှူခံနှိုး ဆော်လျက်ရှိရာ အနယ်နယ်အရပ် ရပ်မှ အလှူရှင်များထံမှ အလှူ တော်ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ၃ဝ ကျော် အလှူခံရရှိထားပြီး စေတီတော် ကြီးကို ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ် သည်။ ရပ်နီးရပ်ဝေးအလှူရှင်များ အနေဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့ရုံး ဖုန်း ဝ၇၂-၂၁၂၇၁၊ ဦးတင်မျိုးလွင် ဝ၉-၆၈၁၈၁၄၄၊ ဦးစန်းမောင် ဝ၉-၆၈၁၈၁၄၅၊ ဦးဇော်နိုင် ဝ၉-၄၅၉၂၁၅၁၁၅ နှင့် စစ်ကိုင်း ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ငွေစာရင်းအမှတ် ဝ၅၈၁၇၂ဝဝဝဝ၁၄၂ တို့သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်သည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူများ??
မန်ယူကို ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်း အတွက် နောင်တ မရကြောင်း ဝင်းဂါး ဖွင့်ဟ